ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com ပန်းဦးခြွေတဲ့ ခဲအို ( စဆုံး )
န့်သွားပြီးနောက် ရေစီးနှင့်အတူ မျောပါသွားသည်ကို ထွေးအိ လိုက်ပြီး ကြည့်နေမိသည်..။ တရုတ်စကားပန်းပွင့်ဖြူဖြူလေးက ရေစီးအတိုင်း လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး မျောပါသွားရသည် မဟုတ်..။ ရေစပ်တွင်ရှိသော သစ်မြစ်ဆုံများ ၊ ကျောက်တုံးများကို ကွေ့ပတ်ကာ မျောပါသွားရသည်..။ ပန်းပွင့်လေးက အရာဝတ္ထုတို့ကို လွယ်လွယ်ကူကူတော့ ကွေ့ပတ်သွားနိုင်သည် မဟုတ်ပါ..။ ဆုံတွေ့သော အရာတို့ကို ရေစီးအရှိန်နှင့်အတူ တိုးတိုက်ထိခိုက်မိပြီးမှသာ ရေစီးနှင့် ပါသွားရခြင်း ဖြစ်သည်..။ ထွေးအိဘဝကရော တရုတ်စကားပန်းပွင့်ဖြူဖြူလေးလို ကြွေကျသွားခဲ့ပြီး အခု ရေစုန်မျောရတော့မှာလား...။ မျောချင်တိုင်းမျော ဆိုပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် မျောချလိုက်ရင်လည်း လမ်းခုလတ်မှာ ကြုံတွေ့ရမည့် အပိတ်အပင် အတားအဆီးများနှင့် ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်ဦးမလဲ မသိ..။
ထွေးအိရင်မှာ တင်းကြပ်လှသည်..။ ဒီလိုအတွေး ဒီလိုခံစားချက်တွေနှင့် ထွေးအိရင်ထဲ မွန်းကြပ်နေခဲ့ရတာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်..။ အမှန်တော့ အပြစ်ရှိသူက ထွေးအိရယ်ပါ..။ ထွေးအိက ဆတ်ဆော့ မိတာကိုး..။ သူ့ကိုရော အပြစ်မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ရမလား..။ တကယ်ဆို သူက ကိုယ့်ထက် အသက် အများကြီး ကြီးတဲ့သူပဲ..။ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်တာပဲ..။ ထွေးအိက ဆတ်ဆော့အုံးတော့ သူက ဆင်ခြင်နိုင်တာပဲ..။ အို...ဒါမျိုးဆိုတာကလဲ အခက်သားကလား..။ စဉ်းစားဉာဏ်တွေ ကွယ်ပျောက်သွားတတ်တာမျိုး မဟုတ်လား..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထွေးအိ သူ့ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့တော့ မရိုးစွပ်ချင်တာ အမှန်ပါ..။ တော်သေးသည်..တစ်နေ့မှ စိတ်မအေးခဲ့ရ..။ တွေး၍ ပူနေခဲ့ရသော ကိစ္စက အခု ၃ လကျော်လာတဲ့အထိ ဘာမှ ထူးခြားမှု ရှိမလာတော့ ထွေးအိ ပူပန်ရတာ တစ်မျိုး သက်သာသွားသည်..။ ဒါပေမယ့် အရိပ်မည်းကြီးက ထွေးအိနောက် ကပ်ပြီးလိုက်ပါနေသေးသည်..။ ဒီအရိပ်မည်းကြီးကတော့ ဘယ်တော့မှ ကင်းကွာသွားမလဲ မသိတော့ပါ..။ ထွေးအိ အမြဲတွေးနေမိတာက ငါဟာ ဟိုတုံးကလို သန့်သန့်စင်စင် မဟုတ်တော့ဘူး..ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကြီးက ထွေးအိရင်မှာ ဘယ်လိုမှ ပျောက်၍ မသွား...။
``ဟင်း...........`` ထွေးအိ သက်ပြင်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြီး ချလိုက်သည်..။ပြီးတော့ ချောင်းရေပြင်ထက်သို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်မိပြန်သည်..။ ရေပြင်တွင် ထင်ဟပ်နေသော သူမ၏ ပုံရိပ်က ပကတိ ကြည်လင်သန့်စင်လို့ နေသည်..။ ကျစ်ဆံမြီးလေးနှစ်ချောင်း ဘယ်ညာချ၍ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း နှာတံပေါ်ပေါ် မျက်ဆံကြီးကြီး လေးနှင့် သူမ၏ ရုပ်လွှာက ဘာမှ ပြောင်းလဲ မသွား ။ ပါးလေးနှစ်ဖက်တောင် မသိမသာလေး ပို၍ ဖောင်းလာပြီး အရင်ကထက်ပင် ပိုပြီး လှလာသယောင် ထင်မှတ်ရသည်..။ ဒါပေမယ့် ထွေးအိရင်ထဲမှာတော့ သူမကိုယ် သူမ ညစ်နွမ်းနေပြီ ဆိုသည့် အစွဲအလန်းကြီးက ရင်ထဲမှာ အမြဲ မွန်းကြပ်နေရသည် မဟုတ်ပါလား..။ အဲဒီနေ့ အဲဒီအဖြစ်ပျက်ကိုလည်း ထွေးအိ တစ်သက်လုံး မေ့လို့ရလိမ့်မည် မဟုတ်တော့ပါ..။
မှတ်မှတ်ရရ ထွေးအိ ၁၈ နှစ် တင်းတင်းပြည့်တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဝါခေါင်လဆန်း (၁၀) ရက်နေ့ကပေါ့..။ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ထွေးအိ အမြဲ လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခု ရှိသည်..။ ညနေစောင်းတွင် ရွာဦးစေတီသို့ သွား၍ ပန်းနှင့် ဆီမီး ကပ်လှူသည့် အလေ့အထလေးပင် ဖြစ်သည်..။ ရွာဦးစေတီက ရွာနှင့် တဆက်တစပ်တည်း ရှိသည်မဟုတ်ပါ..။ ရွာတန်းရဲ့ ထိပ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝန်းကြီးရှိသည်..။ ကျောင်းဝန်း အလွန်တွင် ရေကန်ကြီး သုံးကန်ရှိသည်..။ ထိုရေကန်ကြီးများကို လွန်၍ ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်သွားပါမှ ရွာဦးစေတီသို့ ရောက်သည်..။ ရွာဦးစေတီ၏ ပရဝုဏ်ဘေးတွင် ရွာဦးနတ်စင်များ ရှိသည်..။ အခါကြီးရက်ကြီးနေ့များတွင် ရွာဦးစေတီတွင် လူစည်ကားပြီး နေတတ်ပေမယ့် ကျန်ရက်တွေမှာတော့ လူသူ ကင်းရှင်း၍ နေတတ်သည်..။ ထွေးအိ ရွာဦးစေတီကို ရောက်၍ ပန်း ၊ ဆီမီးများ လှူဒါန်းကာ ဆုတောင်းသည်..။ ပြီးတော့ ညနေဆည်းဆာချိန်တွင် ရွာဦးစေတီမှ ကြည့်လျင် လယ်ကွင်းများ ၊ ရွာမှ အိမ်တန်းများ ၊ လယ်ကွင်းတွေ အလွန် ခြံများနှင့် ရှုခင်းမှာ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလှသဖြင့် ထွေးအိ ချက်ချင်း မပြန်သေးပဲ ရွာဦးစေတီ၏ တံတိုင်းမုခ်ဝ တွင်ရှိသော အုတ်ခုံကြီးပေါ်သို့ တက်ကာ ခဏထိုင်နေလိုက်သည်..။ ထွေးအိ ပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းတွေကို ကြည့်၍ မဆုံးမီမှာပင် မိုးစက်မိုးပေါက်တွေက ကျရောက်လာတော့သည်..။ ထွေးအိ အုတ်ခုံပေါ်မှ ခုန်ဆင်းပြီး လှမ်းအထွက်လိုက် မိုးက ပိုသည်းလာသည်..။ ထွေးအိတွင် ခမောက်လည်း မပါ.၊ ထီးလည်း မပါချေ..။ ရွာဘက်သို့ ထွေးအိ ခပ်သုတ်သုတ်လေး လျှောက်ပြန်လာခဲ့သည်..။ မိုးက မစဲဘဲ သည်းမြဲ သည်းလို့နေသည်..။ ထွေးအိတစ်ကိုယ်လုံး စိုရွှဲ၍ နေပြီ..။ ရေကန်ကြီးများနား အရောက် ထွေးအိ ချမ်း၍ တုန်လာသည်..။
တစ်ချက်တစ်ချက် တိုက်လိုက်သော လေက ချမ်းအေးလှသည်..။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းကြီးကို လွန်၍လာသည်..။ နောက်ထပ် ဆယ်မိနစ်ခန့် လျှောက်လျင် အိမ်သို့ ရောက်တော့မည်..။ အားတင်း၍ ဆက်လျှောက်ပါက လျှောက်နိုင်သည်..။ ဒါပေမယ့် ထွေးအိ မလျှောက်ချင်တော့..။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းအလွန်နားတွင် ထွေးအိတို့ အစ်မ မအေးမိတို့ ခြံရှိသည်..။ ထွေးအိအစ်မဖြစ်သူ၏ ခြံထဲသို့ ပြေးဝင်ခဲ့သည်..။
``ဟာ...ထွေးအိ..ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ...မိုးရွာထဲကြီး...သွား သွား..အိမ်ပေါ်တက်..နင့်အစ်မ အဝတ်တွေနဲ့ လဲထားလိုက်...`` ``ဟို....ဟို ..ရွာဦးစေတီက...ပြန်လာတာ....`` ထွေးအိ အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်လျင် အိမ်ရှေ့ကုန်းထဲ၌ အင်္ကျီမပါ ကျောပြောင်ကြီးဖြင့် နွားစာစဉ်းနေသော သူမ၏ ခဲအို ကိုလှဦးက လှမ်း၍ ပြောသည်..။ လှဦး ညနေတိုင်း သောက်တတ်သည်..။ လှဦးကို ပြန်ပြောသော ထွေးအိအသံက ချမ်းလွန်းသဖြင့် လေက သိပ်ပြီး မဆက်ချင်..။ ထွေးအိ ရေစိုကြီးနဲ့ပင် အိမ်ပေါ်သို့ တက်လာခဲ့သည်..။ ``နင့်အစ်မ နဲ့ သံချောင်းတော့ နင်တို့အိမ်ကို သွားတယ်..၊ မိုးတိတ်မှ ပြန်လာမယ်နဲ့ တူတယ်..`` အိမ်ရှေ့မှ လှမ်းပြောလိုက်သော လှဦးအား ထွေးအိဘာမှ ပြန်၍ မပြောမိ..။ သံချောင်းဆိုတာက ၄ နှစ်သာရှိသော သူမ၏ တူလေးဖြစ်သည်..။ မီးဖိုချောင် နောက်ဘက် နံရံတွင် ဝါးထရံကြား၌ ညှပ်၍ လှန်းထားသော အစ်မဖြစ်သူ၏ ထဘီတစ်ထည်ကို ဆွဲယူ၍ ရေစိုအဝတ်နှင့် လဲကာ ဝတ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမရဲ့ ရေစိုနေတဲ့ ထဘီကို ညှစ်ကာ နံရံရှိ ဝါးတန်းကြား၌ ညှပ်၍ ပြန်လှန်းလိုက်သည်..။ ထို့နောက် သူမ၏ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှ အင်္ကျီများကို ချွတ်၍ ထဘီကို ရင်လျားပြီး အခန်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သည်..။ အခန်းထဲရှိ ကြိုးတန်းပေါ်မှ အစ်မဖြစ်သူ၏ အင်္ကျီများထဲမှ တစ်ထည်ကို ဆွဲယူလိုက်သည်..။ ဘော်လီတော့ မဝတ်တော့..။ အင်္ကျီ ခပ်ထူထူ လေးပဲ ဝတ်ပြီး ပြန်မည်ဟု တွေးကာ ထွေးအိ အခန်းပေါက်ကို ကျောပေးပြီး ရင်လျားထားသော ထဘီကို ခါးသို့ လျှော၍ ဝတ်လိုက်သည်..။ ထွေးအိရဲ့ ခန္ဓကိုယ် အပေါ်ပိုင်း တစ်ခုလုံး ဘာအဝတ်အစားမှ မရှိပဲ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်သွားသည်..။ ထွေးအိ လက်ထဲမှ အင်္ကျီကို ဝတ်ရန် လက်နှစ်ဖက် ပင့်မြှောက်ကာ ဘယ်ဖက်လက်ဖြင့် အင်္ကျီလက်ပေါက်ကို အစွပ်......
သူမ၏ နောက်မှ နေ၍ တစုံတယောက်က သိုင်းဖက်လိုက်သဖြင့်
ထွေးအိ ကြောက်အားလန့်အား လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လှဦးကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ကြောက်လန့်စွာဖြင့် ထွေးအိက ရုန်းလိုက်ပေမဲ့ မြဲမြံလှတဲ့ လှဦးရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က သူမကို အတင်းညှစ်၍ ဖက်ထားသလို လှဦး လက်ဖဝါးတစ်ဖက်ကလည်း သူမ၏ နို့လေးတစ်ဖက်ကို အုပ်ကိုင်ကာ ဖွဖွလေး ဆုပ်နယ်နေသည်..။ လှဦးထံမှ အရက်နံ့က ထွေးအိ ခေါင်းပင် ကိုက်ချင်လာသည်..။ ထွေးအိ အတင်းရုန်းသည်..။ သူမခန္ဓကိုယ်က လှုပ်၍ပင် မရချေ..။ ``လွှတ်ပါ….အစ်ကိုလှဦး…ရှင်…ခွေးကျင့်ခွေးကြံ …မကြံ နဲ့…အစ်မ နဲ့ ပြန်တိုင်ပြောမှာ….နော်…``
``ထွေးအိကလဲ ဟာ..ခုဟာက ဘယ်သူမှ သိတာမှ မဟုတ်တာ…နင့်အစ်မ ပြန်တိုင်လိုက်လို့ အေးမိ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လုပ်မှ….နင်ပဲ..အရှက်ကွဲလိမ့်မယ်….``
ထွေးအိ ငိုချလိုက်သည်… ။. လှဦးကတော့ တပြားသားမှ မလျှော့ပါ..။ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထွေးအိကိ နောက်မှ ကြုံး၍ ဖက်ထားပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က ထွေးအိ၏ နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ပင် ကိုင်၍ ဆုပ်နယ်နေပါသေးသည်..။ ထွေးအိတစ်ကိုယ်လုံး အပူလှိုင်းတို့က တဖြေးဖြေး ရစ်ပတ်လို့ လာသည်..။ ထွေးအိ သူ့ကို ဘာမှ မပြောနိုင်တော့…။ ငိုမြဲ ငိုလျက်သာ ရှိသည်..။
``အီး..ဟီး ဟီး…ဟီး…ဟင့်….အီး….ဟီး……`` ပြီးတော့ လှဦးက ထွေးအိရဲ့ မွှေးညှင်းနုနုလေးတွေ ပေါက်နေသော ဂုတ်ပိုးသား နုနုဖွေးဖွေးလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိစုပ်၍ ဒလစပ်ပင် နမ်းနေသည်..။ ထိုသို့ နမ်းရင်း သူ့လျှာဖျားဖြင့် ဂုတ်ပိုးသားလေးတွေကို ထိုးထိုးပြီး ယက်လိုက်သေးသည်..။ ထွေးအိ ဒူးတွေ မခိုင်တော့ ၊ ညွှတ်၍ ကျချင်လာသည်..။ ထွေးအိ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့.. ။ လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုလဲ မစဉ်းစားနိုင်တော့..။ တစ်ကိုယ်လုံး ရစ်သိုင်း၍လာသော ဖိန်းရှိန်းလို့ လာသော အပူလှိုင်း ခံစားချက်တို့သာ အာရုံက ရောက်၍ရောက်၍ လာသည်..။ တဟီးဟီး ငိုသံလေးက တဖြေးဖြေး ပျောက်၍ သွားပြီး တစ်ချက်တစ်ချက် ရှိုက်သံလေးများနှင့် အတူ မျက်ရည်များကတော့ တစိမ့်စိမ့် ထွက်နေဆဲ..ဖြစ်သည်..။ ``ဟင်…မလုပ်နဲ့…..မလုပ်နဲ့…..လို့….`` ထွေးအိ လှမ်းဆွဲလိုက်ပေမယ့် နောက်ကျသွားပြီ..။ ခါးတွင် ဖြစ်သလို ပတ်ထားသော ထဘီလေးက ကွင်းလုံးကျွတ်ကျသွားသည်..။ ဒီမှာတင် ထွေးအိ နို့လေးတွေပေါ်မှ သူ့လက်ကြီးက ထွေးအိရဲ့ တင်သားဖွေးဖွေးကားကားကြီးများ အပေါ် ရောက်သွားပြီး ညှစ်နယ်ပါတော့သည်..။ ``အိ…အိ…မလုပ်ပါနဲ့….ဟင့် ဟင့်……`` သူ့လက်ဖဝါးကြမ်းကြမ်းကြီးက ထွေးအိရဲ့ တင်သား ဖွေးနုနုကြီးတွေကိ အားရပါးရ ဆုပ်နယ်နေလိုက်တာ ထွေးအိကိုယ်လေးပင် ရှေ့သို့ ငိုက်ငိုက်ကျ သွားရသည်..။ ထွေးအိကို မြဲမြံစွာ ထိန်ချုပ်ဖက်တွယ်ထားသော သူ့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကတော့ ထွေးအိကိုယ်လေးကို မလွှတ်…။ တင်းတင်းကြီး ဖက်ထားမြဲ….။ ခက်တာက ထွေးအိ ဖင်ကိုင် မခံနိုင် ခြင်းပင် ဖြစ်သည်…။ နောက်မှ တင်သားကြီးတွေကို အကိုင်ခံရလျင် အရှေ့က ဟာလေးက တရွရွဖြစ်လာကာ ဖောင်းထလာတတ်သည်..။
``အို အို….မလုပ်နဲ့…တော်တော့….တော်ပါ တော့ဆို….
ထွေးအိ တောင်စဉ်ရေမရ ဘာတွေ ပြောလို့ ပြောမိမှန်း မသိတော့…။
တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသော ထွေးအိ ရုန်းကြည့်ပြန်သည်..။ သူမ၏ အဝတ်မဲ့ ခန္ဓကိုယ်လေးက လှုပ်၍ပင် မရအောင် သူ့လက်ကြီးက ခိုင်မြဲ သန်စွမ်းလှသည်..။ ``ထွေးအိကလဲ ဟာ..အလကား အပင်ပန်းခံပြီး ရုန်းနေသေးတယ်..ဘယ်သူ သိတာမှတ်လို့..`` ``အစ်မတို့ ..ပြန်…လာရင် ခက်မယ်…..``
``ဟဲ..ဟဲ…နင့်အစ်မနဲ့ နင့်တူက ငါသွားခေါ်မှ ပြန်လာမှာဟ… ကဲ..လာပါ ဟာ..``
လှဦးက ထွေးအိကိုယ်ပေါ်မှ ဖက်ထားသော သူ့လက်ကြီးကို ဖယ်လိုက်ပြီး အိပ်ယာထဲ ဆွဲ၍ ခေါ်သည်..။ ခြေတစ်လှမ်းစာမျှ ဝေးသော အိပ်ယာဆီသို့ ထွေးအိ ကိုယ်လုံးလေး ရောက်၍အသွား လှဦးက လက်တစ်ဖက်မှ ထွေးအိကို ကိုင်ထားရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်က သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်..။ ``ဟာ….`` ထွေးအိမြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်ရသေးသည်..။ တစ်မိုက်လောက် ရှိသော သူ့ဟာကြီးက အကြောတွေ အပြိုင်းပြိုင်းထလျက် တန်းမတ်နေသည်..။ ထိပ်ကြီးက အိမ်ရှေ့မန်ကျည်းပင်ကြီးတွင် တွေ့ရသော ပုတ်သင်ညိုအကောင်ကြီး၏ ခေါင်းကြီးလောက် ရှိသည်..။ ပြီးတော့ ပုတ်သင်ညိုခေါင်းလို တဆတ်ဆတ် ငြိမ်ကလျက် ထွေးအိကို ဖျားယောင်းခေါ်ဆောင်နေသလို ဖြစ်နေသည်..။ ထွေးအိ သူ့ဟာကြီးကို ကြည့်မိရင်း ခဏမျှ ငိုင်ကျသွားသည်..။ ထိုခဏမှာပင် လှဦးက အိပ်ယာပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူမကိုပါ ဆွဲထိုင်ချလိုက်သည်..။ ထွေးအိတစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်လေး ဖြစ်အသွား ထွေးအိကို ဖက်၍ လှဲချလိုက်တော့မည် အလုပ် ထွေးအိတစ်ယောက် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပဲ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာ ရှိသော ထဘီကို လှမ်းဆွဲကာ ဆတ်ခနဲ ထ၍ ပြေးသည်..။
ထွေးအိထ၍ အပြေး သူ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိုး၍ ခြေဂလန့် ထိုးခံလိုက်တော့ ထွေးအိ ဝုန်းခနဲ ပစ်လဲကျသွားတော့သည်..။
ထွေးအိ ခါးလေးကို လက်ဖြင့် နှိပ်ရင်း ငြီးတွားနေရာမှ ထ၍ထိုင်ရန် ကြိုးစားလိုက်သည်..။
``ထွေးအိကလဲဟာ…နင်က အသားနာခံချင်တာကိုး…အလကား အချိန်တွေ ကြာနေတယ်… အသားလဲ နာတယ်…ငြိမ်ငြိမ် သက်သက် နေလိုက်ရင် ခုလောက်ဆို နင် အိမ်ပြန်လို့ရသွားပြီ…`` ထွေးအိ ထထိုင်ရန် ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် ခါးက အတော်နာနေသဖြင့် မထိုင်နိုင်တော့ပါ..။ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ရင်းသာ လက်တစ်ဖက်က ခါးကို နှိပ်နေရသည်..။ ထွေးအိ ပုံစံလေးက တစောင်း မကျတကျ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်နေပြီး ပေါင်ဖြူဖြူလေးတစ်ဖက်က ကြွ၍ နေသည်..။ ပေါင်ကြားမှ အုပ်ဆိုင်းနေသော မဟူရာတောလေးက သူမ၏ ရတနာသိုက်တံခါးကို စိုးစိမျှ မမြင်ရလေအောင် ဖုံးကွယ်ထားသည်..။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ပုဂံသာသာမျှ သူမ၏ နို့တင်းတင်းလေး နှစ်လုံးက မူလက ဖွေးအုနေပေမယ့် လှဦးရဲ့ ကိုင်တွယ်ညှစ်နယ်မှုကြောင့် နီရဲ၍ နေသည်..။ အပျိုနို့သီးသေးသေးလေးတွေက မြင်ရုံဖြင့် သိသာလောက်အောင် ထောင်ထ၍ နေချေပြီ…။ ပေါင်ကြားမှ အင်္ဂါစပ်ကိ စမ်းကြည့်စရာ မလို..။ နို့သီးတွေ မာ၍ ထောင်လာလျင် ထိုမိန်းမ စပ်ယှက်ခံရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ လှဦး သိပြီးသာ…။ အိပ်ယာခြေရင်းတွင် လဲကျနေသော ထွေးအိအား လှဦးက ဖက်၍ အိပ်ယာပေါ် ဆွဲတင်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ဖက်ထားလျက်က ထွေးအိရဲ့ နို့ကို ကုန်း၍ စို့ပေးလိုက်သည်..။
ကောင်မလေး နာသွားတာတော့ မဖြစ်နိုင်..။
နို့သီးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ထိုးယက်ရင်း ဖွဖွလေး ကိုက်စို့ပေးလိုက်တာဖြစ်သည်..။ နာတာမဟုတ်ရင် ထွေးအိ ခံရခက်သွားတာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်..။ လှဦးရဲ့ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ပေါင်ကြားကို လှမ်းလိုက်တော့ ထွေးအိက ပေါင်နှစ်လုံးကို တင်းနေအောင် စေ့ထားလိုက်သည်..။ စောက်မွှေးထူထူလေးတွေကို လက်ဖဝါးဖြင့် ပွတ်ရင်း စောက်ဖုတ်အပေါ်ပိုင်း အသားခုံနုနုလေးကို သူ့လက်ဖဝါး ကြမ်းကြမ်းကြီးဖြင့် ဆုတ်၍ဆုတ်၍ ညှစ်ညှစ်ပေးသည်..။ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ဇိမ်ဆွဲ၍ စို့ပေးရင်း လှဦး ထွေးအိမျက်နှာကို လှမ်း၍ ကြည့်သည်..။ အပျိုမလေး မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တင်းတင်းစေ့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်..။ လှဦးက သူ့လက်ကို ပေါင်ကြားသို့ မသိမသာ ထိုးသွင်းကြည့်သည်..။ ပေါင်နှစ်လုံးက စေ့ထားသော်လည်း စောစောကလို တင်းတင်းကြီး မဟုတ်..။ ဒါကြောင့် ပေါင်လေးထဲ လက်ကို ဆတ်ခနဲ ထိုးသွင်းလိုက်တော့ သတိ၇သွားသော ထွေးအိက ပေါင်ကို တင်းတင်းကြီး ပြန်စေ့လိုက်သည်..။ လှဦး၏ လက်တစ်ခုလုံး ပေါင်ကြားသို့ ဝင်မသွားသော်လည်း လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလယ်ကတော့ ပေါင်ကြားတွင် တိတိပပကြီး ညှပ်၍ သွားသည်..။ ညှပ်သွားတာမှ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကြား အကွဲကြောင်းနှင့် ကပ်လျက်ဖြစ်သည်..။ စောက်စေ့ငုတ်လေးထွက်နေတာကိုတောင် ထိမိနေရသည်..။ နို့စို့နေရက်က ပေါင်ကြားထဲတွင် ညှပ်နေသော သူ့လက်ညှိုး လက်ခလယ်တို့ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှေ့တိုးနောက်ငင် လုပ်ပေးသည်..။ ထိုအခါ အပြင်သို့ထွက်ပေါ်နေသော စောက်စေ့ငုတ်ကလေးကို ဆွဲဆွဲပွတ်သလို ဖြစ်၍ နေသည်..။ မကြာလိုက်....
ထွေးအိနှုတ်ဖျားမှ အသံလေးထွက်သွားပြီး ထွေးအိပေါင်နှစ်ဖက်မှာ ဟတယ်ဆိုရုံလေး ဟသွားသည်..။ လှဦး၏ လက်ဖဝါးတစ်ခုလုံး ပေါင်ကြားသို့ ရောက်သွားသည်..။ စောက်ဖုတ်မျက်နှာစာကို လက်ဖဝါးဖြင့် အုပ်ကာ အကိုင်လိုက် ရွှဲ၍နေသော အရည်တွေကို စမ်းမိလိုက်သည်..။ လှဦးလက်ညှိုး စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဖြေးဖြေး တိုးဝင်သွားသည်..။ ပြီးတော့ နို့သီးလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိကြိတ်ရင်း လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက် ပြန်နှုတ်လိုက် လုပ်ပေးသည်..။ ထွေးအိ မခံနိုင်....။
ထွေးအိ၏ အသံက စောစောကလို ဒေါသသံ မဟုတ်.၊ မောသံဖြင့် စကားကို မနဲ အားယူ ပြောနေရပြီး တောင်းပန်ခယသံ ဖြစ်သည်..။ လှဦး ပြုံးလိုက်ပြီး ထွေးအိရဲ့ ကိုယ်ပေါ်လှိမ့်တက်လိုက်ရာမှ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဆွဲဖြဲလိုက်သည်..။ ထွေးအိ မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တင်းနေအောင် စေ့ထားသည်..။ လှဦးက သူ့လီးကို လက်တစ်ဖက်မှ ကိုင်၍ စောက်ပတ်ဝကို တေ့ပြီး ဆတ်ခနဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။
ထွေးအိမျက်နှာလေး မော့ပြီး သွေးကြောလေးတွေ ထောင်သွားသည်..။
လီးထိပ်ခေါင်းတစ်ခုလုံး ဝင်သွားပြီ..။ ခေါင်းဝင်မှတော့ ကိုယ်ဆန့်ပြီပေါ့...။
လီးကို ထပ်၍ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖိဖိသွင်းသည်..။
လှဦး အောက်သို့ ငုံ့ကြည့်သည်..။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခုက သူ့လီးကြီးကို မဆန့်မပြဲ ငုံကာ လက်ခံနေသည်..။ လီးက တစ်ဝက်သာသာတော့ ဝင်သွားပြီ..။ လှဦး ထွေးအိရဲ့ မျက်နှာလေးကို လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်သည်..။ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ကာ ခံနိုင်အောင် ခံမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ပုံပေါက်နေပါသည်..။ လှဦး တဖန် ဆောင့်၍ လီးကို ဆတ်ခနဲ သွင်းလိုက်ပြန်သည်.။
ထွေးအိ သံရှည်လေးဖြင့် ငြီးလိုက်ရင်း ပေါင်နှစ်ဖက်က အစွမ်းကုန်ကား၍ ထွက်သွားသည်..။ အထဲမှာ အရည်တွေက အတော်ကြီး ရွှဲ၍ ထွက်နေသည်..။ လှဦး သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ကုန်း၍ စို့လိုက်ပြီး ကျန်နေသော လီးကို ဖိဖိပြီး သွင်းလိုက်သည်..။
ထွေးအိ ခါးလေး ကော့တက်သွားသည်..။ သူ့လီးကြီးက စောက်ဖုတ်လေးထဲမှာ မဆန့်မပြဲကြီး ပြည့်သိပ်၍ နေသည်..။ ထွေးအိ ခါးနာသော ဝေဒနာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်တော့..။ အထဲတွင် ပြည့်သိပ်ကြပ်ညှပ်စွာ ရောက်နေသော သူ့လီးကြီးကို အားမလိုအားမရဖြင့် ဆွဲဆွဲပြီး ညှစ်နေမိသည်..။ သူမကို သူမတော့ ဘာတွေ လုပ်မိနေမှန်း မသိ....။ ``ကောင်းလိုက်တာ....ထွေးအိ...ရယ်....`` တစ်ကိုယ်လုံး ဆိမ့်တက်သွားသော လှဦးက တိုးတိုးလေး ငြီးလိုက်ရင်း ထွေးအိ ၏ စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ မချိမဆန့် တဆုံးတိုင် ဝင်နေသော သူ့လီးကြီးကို ထပ်၍ ဖိသွင်းသည်..။
တဆုံးဝင်၍နေသော လီးကို ထပ်၍ဖိသွင်းလိုက်တော့
လီးက ထပ်၍ မဝင်တော့ပဲ လီးအရင်းနှင့် စောက်ပတ်ဝ ဖိလိုက်မိသည့် ဒဏ်က ယောက်ျားအားနှင့်ဆိုတော့ ထွေးအိ အတော်လေး ခံစားသွားရသည်..။
တွေးအိက နှုတ်ခမ်းလေး စူ၍ အမူပိုပိုလေးပြောလိုက်သည်..။ လှဦးက သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်၍ ဖင်ကြီးကို ကြွကာ ကြွကာနဲ့ လိုးသည်..။
ထွေးအိ မျက်လုံးလေးတွေ မဖွင့်တော့ပဲ ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ
သူမ၏ ဦးခေါင်းလေးက ဘယ်ညာ ခါယမ်းနေတော့သည်..။
ဒါတင်မက ထွေးအိ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးတွေက လည်း လုံးခနဲ လုံးခနဲ ဖြစ်လို့လာသည်..။
``အင်း…အစ်ကိုရယ် ခုမှ ထွေးအိတို့ ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ….
ထွေးအိ အလူးအလဲ ခံစားနေရသည့်ကြားက
သူမသိချင်သော အရာကို အားယူ၍ မေးသည်.. ။
``အစ်ကို အေးမိနဲ့ မရခင်ကတည်းက ထွေးအိကို သဘောကျနေတာ…
တစ်နေ့တော့ မဖြစ် ဖြစ်အောင် ချစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ….``
``ဒါပေမယ့် အစ်ကို ထွေးအိရဲ့ စိတ်ကို နားလည်တယ်….
ဒီတစ်ခါ ပဲ ချစ် လိုက်ရရင် တော်ပါပြီ……..``
``ဟင်……….`` ထွေးအိက ဟင်ခနဲ ဖြစ်ကာ သူ့ကို အလန့်တကြား မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည်..။ ပြီးတော့ သူမ၏ ခေါင်းကို ရမ်းကာ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ပြန်၍ ပိတ်ထားလိုက်သည်..။ ခဏအတွင်း မျက်လုံးဒေါင့်စွန်းမှ မျက်ရည်စလေးများ စို့၍ ထွက်လာသည်..။ လှဦးက ဒူးထောင်၍ လိုးနေရာမှ သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့မှောက်ချကာ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ရင်း ဖင်ကို ကြွကြွပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်..။ ထွေးအိမှာ ဆောင့်လိုးသည့်ဒဏ်ရော လှဦး၏ ကိုယ်လုံးကြီး ဖိထားသည့်ဒဏ်ကိုပါ နှစ်ခုစလုံး ခံစားနေရသည်..။ ဒါပေမယ့် ထွေးအိ ကျေနပ်နေသည်..။ သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချထားသော လှဦးကိုယ်လုံးကြီးကို လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် မိမိရရ ပြန်ဖက်ထားသည်..။
အီး …အား……….အင်း….အိုး… အစ်ကို့…….အီး..အား…………..``
ထွေးအိ သူမကိုယ် သူမ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိ…၊
လှဦး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းကြုံးဖက်ပြီး အပေါ်မှ ဖိထားသည့်ကြားက သူမ၏ ခါးလေး အတင်းကော့တက်လာကာ တစ်ကိုယ်လုံး ခါဆင်းသွားသည်..။ ထွေးအိ ပြီးသွားပြီဆိုသည်ကို သိလိုက်သော လှဦးကလည်း ခပ်သွက်သွက် အချက် ၂၀ ခန့် ဆောင့်ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်ပြီး သုတ်ရေတွေကို ပန်းထည့်လိုက်လေသည်..။ အတန်ကြာအောင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖက်၍ ငြိမ်နေကြပြီးတော့မှ လှဦးက ဘေးသို့ ပက်လက်လှန်၍ ချလိုက်သည်..။ ထွေးအိ သူမဘေးတွင် ပက်လက်ဖြစ်သွားသော လှဦးကို တစ်ချက်ငဲ့စောင်း၍ ကြည့်လိုက်ပြီးမှ ထ၍ ထိုင်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် လှဦးကို ကျောပေး၍ အဝတ်အစားများကို ပြန်၍ ဝတ်သည်..။ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စကားမပြောဖြစ်ကြချေ…။
လှဦးက သူ့ကို ကျောပေး၍ အဝတ်အစားများ ဝတ်နေသော ထွေးအိကို မျက်တောင်မခတ် နောက်မှ ကြည့်နေမိသည်..။ အင်္ကျီတွေ ဝတ်ပြီးသွားတော့ ထွေးအိက နောက်ဆုံး ထဘီကို ခြေထောက်မှ စွတ်လိုက်ပြီး မတ်တတ်ထ၍ ရပ်ကာ ဝတ်လိုက်သည်..။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ အခန်းဝဖက်သို့ လှည့်၍ အပြင်သို့ ထွက်သွားသည်..။ ထွေးအိ လှဦးကို တစ်ချက်လေးမှ လှည့်မကြည့်ပေ…။ အခန်းဝဖက်သို့ လှမ်း၍ထွက်သွားသော ထွေးအိ၏ မျက်ဝန်းတို့တွင်တော့ မျက်ရည်များ ဝိုင်းလျက် ရှိသည်ကို လှဦး အထင်းသား မြင်တွေ့လိုက်ရသည်..။
ထွေးအိ အ်ိမ်ရှေ့ကို ရောက်တော့ သူမဖိနပ်ကို စီးပြီး အိမ်အောက်သို့ ဆင်းလိုက်သည်..။ အပြင်တွင် မိုးက မသည်းတော့ပေမယ့် စဲတော့ မစဲသေးချေ…။ ထွေးအိ ဟိုဟိုသည်သည် ရှာကြည့်လိုက်တော့ ခမောက်တစ်ခုကို တွေ့သဖြင့် ဆွဲ၍ ဆောင်းကာ မိုးဖွဲဖွဲကြားသို့ ထွက်လာခဲ့သည်..။ ထွေးအိ ခြေလှမ်း၍ လျှောက်လိုက်တိုင်း အထဲမှ အရည်တွေက ပြန်၍ ထွက်ကျလာနေသည်..။
လျှောက်ရင်းနဲ့ ပေါင်ကြားတစ်ခုလုံး စေးထန်းထန်း ဖြစ်လာကာ လျှောက်ရတာ ခက်ခဲလာသည်..။ လမ်းလျှောက်ရင်း ထွေးအိ ဘေးဘီကြည့်၍ လူလစ်တာနှင့် ပေါင်ကြားထဲ လက်နှိုက်ကာ ဝတ်ထားသော ထဘီနှင့်သုတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ထဘီတွင် အကွက်လိုက် စွန်းထင်းသွားသည်။ု